Amaphuzu avelele we-RC: Ukuphakama kwe-Aurora West | Izincwadi Zamanje
Kunconywe i-RC: Ukuphakama kwe-Aurora West
Futhi abaningi benu bazothi kungani ngenza ukubuyekeza ngesihloko ngesiNgisi. Hhayi-ke, impela ngoba ngisezinhlungwini futhi angikwazanga ukulinda ukuthi ikhishwe ngoNovemba Isikhathi se-Aurora West, ngesandla se Usayizi we-Pocket. Ngakho-ke, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngenze ukubhuka kwami ​​ukuze ngithenge uhlelo lwangempela lwe- Umzuzwana wokuqala ngenkathi iqala ukuthengiswa ekuqaleni kuka-Okthoba. Ukuphakama kwe-Aurora West isebenza kakhulu njenge spin-off kusuka kuBattling Boy kunokuba njenge-prequel. Kubukeka sengathi Paul upapa, ubaba wezidalwa nethalente elichichimayo, wayekuhlelile kwasekuqaleni ukuthi IHaggard West futhi i-Aurora yabo encane ifanelwe isikhala esithe xaxa kunaleso abanaso Ukulwa Nomfana. Futhi ngokholo banalo kule ndaba ukuthi uyayichaza ngokuhlanganyela nombhali wakhe JT Okuncane. Iqiniso ngukuthi abalandeli baqinisekile ukuthi bazobonga kakhulu ngale ndlela, ngoba ngemuva kokufunda Ukuphakama kwe-Aurora West Ngingasho nje ukuthi akufanele ungaphuthelwa uhlelo lwesiSpanish uma ungalinge ubhekane nesiNgisi.
Ngendlela efanayo, kufanele sibonge kuPapa ngokumphakamisa UDavid rubin ukuphatha ingxenye yesithombe. U-El ourensano, oqokwe njengomdwebi wamakhathuni ohamba phambili onyakeni engqungqutheleni ye-Avilés Comic yakamuva ngomsebenzi wakhe omkhulu e Beowulf, yenza umsebenzi ongajwayelekile emakhasini ayi-150 akha le volumu yokuqala. Ngaphezu kwalokho, ngingasho ukuthi kwezinye izindlela uthola okuningi kubalingiswa kunoPapa uqobo. Kuyabonakala ukuthi ube ne-carte blanche yokwenza nokuhlehlisa endabeni yokulandisa nokwakhiwa kwamakhasi athile, lapho ngihlala khona ngaphezu kwakho konke okuhle, ngisebenzisa imininingwane eningiliziwe nemizwelo ubuso buka-Aurora obudlulisa eNtshonalanga, umlingiswa oyinhloko futhi ojwayelekile umucu wale ndaba oshiya indiza yezinganekwane kakhulu ayenayo Umfana olwayo, ukutshela into esemhlabeni njengobudlelwano phakathi kwendodakazi noyise. Noma ngubani ongafuni ukudla okunye umqashi, yize ngizamile ukubagcina bekhuluma okuncane ngemininingwane ethile noma izinto ezijwayelekile, engingachofozi kuzo Qhubeka ufunda. Nina nonke niyamenywa ukuthi nenze kanjalo.
The Ukuphakama kwe-Aurora West shono okwenzeka ku I-Arcopolis ngaphambi kwemicimbi eyenzeke ku- Umfana olwayo. UPapa, uPetty noRubín basikhombisa impilo yomndeni waseNtshonalanga ezindaweni ezahlukahlukene. Ngaphambi nangemva kokumakwa ngomlilo ngomcimbi obucayi oguqula ubukhona bukababa nendodakazi. Lo mzuzu usivumela ukuthi sibone ukuguqulwa kukaHaggard West kusuka eqhawe lesayensi ngokwesiko labalingiswa abanjengo I-Doc Savage (enengubo yentela yokuthatha izigqoko), imodi yomlindi wasebusuku ehlushwa Batman (umcimbi osemhubeni, izinsimbi njengezimpawu zokuxwayisa ezivela ekuthintaneni neziphathimandla ...). U-Aurora usuka ekubeni yintombazanyana ejabule enesifiso esichichimayo sokuthola izinto ezintsha, aqhubeke nokugcina lowo moya ofanayo wokufuna ukwazi noyise, ekulweni nezilo ezihlasela into engcwele kakhulu engaba khona: izingane. Ukuphela kwendlela angathola ukuhlala ngasohlangothini lukaHaggard ukuqhubeka naleso siko lomndeni, ngenqubo emguqula ekubeni ngumfundi abe ngumlandeli ophelele. Futhi ukuthi ingxenye yokugcina ye-adventure ngaphezu kokuphila ngokuvumelana nesihloko salo msebenzi.
UPapa noPetty bakhulisa icebo lapho izinto ezixubene nozungu, izimfihlo zomndeni kanye nemizwa eminingi kuxubene kuwo wonke amazinga. Kepha okuhle kunakho konke ukuthi sibhekene nendaba engathokozelwa abancane nabadala, ngobunzima obumele lokhu njalo. Abalingiswa abanjengoCroward noma i-catfish encane (isithombe bukhoma se- Gremlins engqondweni yami) abasebenzela iMedula, babonakala bephuma ngqo ochungechungeni lekhathuni noma endabeni. Siphinde sibone futhi okwesibili okubalulekile kwe- Umfana olwayo njengoSadisto nebhendi lakhe (omunye wabo udlala indima ebalulekile), uMiss Grately noma uCaptain of Division 145. Imiklamo kaRubin isiza kakhulu ekwenzeni ivolumu ibe yintsha, ibe mnandi futhi ibe nalelo thoni elifanele noma yiliphi iqembu leminyaka yobudala. Ukuphela kwesidingo ngaphambi kokufunda uTyena Rise of Aurora West ukulungiselela ukujabulela ukufunda ngaphandle kwemingcele.
Umagazini wokuqala wesibili ulula kepha umnandi kakhulu, futhi awubizi ukuya ephaketheni (ngaphansi kwe- € 8 in Incwadi Egcina Amabhuku). Izikhathi eziningi sikhohlwa ukuthi amahlaya enziwe ngokusobala ukuthi afundwe, futhi sithathwa wubuhle bencwadi enoqwembe oluqinile okuthi, kwesinye isikhathi, bube nzima futhi kungakhululeki ukubaphatha lapho ufunda kaninginingi. Le nguqulo yoqobo inombala omnyama nomhlophe okhazimulayo, ngokungafani nalokhu engikufundile (angikakuboni) kwalokhu okuzothengiswa nguDebolsillo emasontweni ambalwa, okuzoba nombala ngenkathi kugcinwa intengo ekhangayo. Angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kepha ngiyavuma ukuthi ngangiwajabulele amakhasi njengengane ngaphandle kwesidingo sombala. Sizolinda ngokulangazela ukuqhubeka kwalesi saga esikhulu kuvolumu yesibili, Ukuwa kweNdlu yaseNtshonalanga, yize ngaphambi kwengxenye yesibili ye- Umfana olwayo, uPapa ebuyisa isici sakhe sombhali ophelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Kunconywe i-RC: Ukuphakama kwe-Aurora West
UDavid rubin kusho
Sawubona, ngiyabonga ngalesi sibuyekezo esihle!
Ngibhala nje ukuphawula ukuthi, njengombhali-mbhali wencwadi, ngokwazi kwami, uhlelo lwaseSpain luzohamba ngokulingana nolweMelika, nokuyindlela engikhulelwe ngayo amakhasi, ngaphandle kombala.
Sanibonani futhi ngiyabonga!
Phendula uDavid Rubín
Sbongiseni Mbhele (@sbongiseni_mbhele) kusho
Ungayethembi imininingwane ekhishwa yiDebolsillo, okuthe ngosuku lwayo yafaka ukuthi iBattlingBoy yakhipha iB & N.
Phendula kuJose Angel Ares (@JoseAngelARES)
URoberto Corroto kusho
Ngisho, ngenye indlela ezungezile, hhayi manje 😀
Phendula uRoberto Corroto
Isiphetho esibuhlungu Sezingane Zamakhosi amaKhatholika
Umklomelo We-VIII Wamazwe Omhlaba Wenoveli Yezithombe